Barnens Skidspel - på Somaliska - Startsida
Hadda waxaa la gaaray waqtigii loogu talagalay tartanka ciyaraha barafka ee caruurta bisha Maarso 2022, tartanka ay dhammaan carruurta ku guuleystaan ​​oo lagu abaalmariyo bilad dahabi ah oo weyn marka la gaaro dhamaadka ciyaarta.
Sabtida, Maarso 5, waxaan ku soo dhaweyneynaa dhammaan carruurta ilaa da'da 10 ka ah inay ku ciyaaraan garoonka Lugnet ee ciyaaraha barafka Skating ee Falun. Looma baahna is-diiwaangelin ka hor iyo waqti goyn, laakiin diiradda ayaa saaran ka-qaybgalka.
Carruurtu waxay dooran karaan inay ku socdaan 200m, 600m iyo 1500m. Dabcan waxaad mari kartaa dhowr wareegyo haddii aad rabto.
Waqtiga iyo kharashka bilowga
09.00 waxaanu furnaa xafiisyo tigidhyo oo aad ka iibsan karto kaadhadhka nambarada, calaamada nambarku waxay shaqaynaysaa shahaado bilow ahaan. Bilawga ugu horreeya 09.30 ilaa hadda
13.30. Kharashka gelitaanka waa 30 SEK/cunug waxaana ku jira bilada skateboard-ka ee carruurta. Lacagaha kaliya ayaa la aqbalayaa iyadoo la isticmaalayo Swish.
Amaahinta qalabka ciyaarta: Waxaa jira tiro xadidan oo qalabka barafka ah oo loo amaahan karo carruurta aan haysan barafka iyo kabaha barafka. Qof weyn oo mas'uul ah wuxuu soo qaataa alaabtisa tiirarka iyo kabaha cabbirka 26-30 isagoo bixinaya macluumaadka xiriirka iyo aqoonsiga. Marka ilmuhu dhammeeyo soo noqoshada
Iibka Cunto/Kafeega: Gudaha garoonka waxaa yaal burgers, sausages soy, kafeega iyo shaaha, fiestas, lucas, iyo buskutka shukulaatada oo iib ah. Microwave-ka ayaa diyaar u ahaan doona inaad ku isticmaasho ku kuleylisatid qadadaada.
Keen qoyska iyo asxaabta Lugnet oo ku raaxayso madadaalo barafka nala!
Iyadoo ay hoos imanayso maamulka degmada Valo, Valo Energy iyo Biyaha.